I-Urinary glucose nesifo sikashukela > Ukuhlaziya
I-Urinary glucose nesifo sikashukela
Ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, kwenziwa ucwaningo lwe-glucosuria (ushukela kumchamo) ukuze kuhlolwe ukusebenza kahle kwendlela yokwelashwa kanye nangendlela eyengeziwe yokuncephezela lesi sifo. Ukwehla kwe-glucosuria yansuku zonke kubonisa ukusebenza kwezindlela zokwelapha. Isikhombisi sokunxephezela uhlobo 2 lwesifo sikashukela ukuphumelela kwe-aglucosuria. Ngohlobo lwe-mellitus yesifo sikashukela 1 (kuncike ku-insulin), ukulahleka komchamo we-20-30 g we-glucose ngosuku kuvunyelwe.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ezigulini ezinesifo sikashukela i-mellitus, umkhawulo wezinso we-glucose ungashintsha kakhulu, okwenza kube nzima ukusebenzisa lezi zinqubo. Kwesinye isikhathi i-glucosuria iqhubeka ne-Normoglycemia ephikelelayo, okungafanele ibhekwe njengophawu lokwanda kwe-hypoglycemic therapy. Ngakolunye uhlangothi, ngokuthuthukiswa kwe-diabetesic glomerulossteosis, umkhawulo we-glucose we-renal uyakhuphuka, futhi i-glucosuria kungenzeka ingabikho ngisho ne-hyperglycemia enzima kakhulu.
Ukukhetha irejimeni efanelekile yokuphatha izidakamizwa ze-antidiabetic, kungakuhle ukuthi uhlole i-glucosuria (ushukela omchamo) ezingxenyeni ezintathu zomchamo. Ingxenye yokuqala iqoqwa kusukela emahoreni ayi-8 kuye kwayi-16, elesibili lisuka emahoreni ayi-16 kuye kwangama-24 bese kuthi okwesithathu lisuke emahoreni angama-0 liye kwayi-8 ngosuku olulandelayo. Inani le-glucose (kumagremu) linqunywa ekukhonzeni ngakunye. Ngokusekelwe kuphrofayili yansuku zonke etholakele ye-glucosuria, umthamo wesidakamizwa we-antidiabetic uyanda, isenzo esiphezulu esizoba phakathi nesikhathi se-glucosuria ephezulu kakhulu. I-insulin yeziguli ezinesifo sikashukela ilawulwa ngesilinganiso seyunithi elilodwa nge-4 g ye-glucose (22.2 mmol) kumchamo.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi njengoba iminyaka ikhula, umkhawulo we-renal wokukhuphuka kwe-glucose, kubantu abadala ungaphezu kwe-16,6 mmol / L. Ngakho-ke, kubantu asebekhulile, ukuhlolwa komchamo nge-glucose ukuthola isifo sikashukela akusebenzi. Akunakwenzeka ukubala umthamo odingekayo we-insulin ngokuqukethwe kweglue kumchamo.